Laftagareen oo dib ugu laabtay Baydhabo iyo doorasho ka bilaabaneysa | SMC
Home WARARKA MAANTA Laftagareen oo dib ugu laabtay Baydhabo iyo doorasho ka bilaabaneysa
Laftagareen oo dib ugu laabtay Baydhabo iyo doorasho ka bilaabaneysa
Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) oo maalmahaan ku sugnaa Magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) ayaa maalmahaan Muqdisho ka waday kulamo lagu dhex-dhexaadinayo Madaxda Dowladda, Midowga Musharixiinta & Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland oo isku khilafsan arrimaha doorashooyinka.
Wararka qaar ee laga helay socdaalka deg dega ahaa ee Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) ee Magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in Maamulka Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) uu noqon doono Maamulkii ugu horreeyay ee bilaaba doorashada Aqalka Sare.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in weli Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) uu wado dadaalada xal raadinta ah, isla markaana uu la xiriiray Madaxweynayaasha jubbaland & Puntland oo aad uga soo horjeeda sida ay Xukuumadda Soomaaliya u wajaheyso arrimaha doorashhoyinka.
Maalmaha ka hor Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen rooble oo ay garab taag naayeen Madaxweynayaasha Galmudug, Hir-Shabeelle & Koonfur Galbeed ayaa waxaa uu ku dhawaaqay in la bilaabayo hirgelinta doorashooyinka, isla markaana an waqtiga lagu dhumineyn Shacabka Soomaaliyeed, iyada oo hadalkaas ay kasoo horjeesteen Midowga Musharixiinta Mucaaradka.
Previous articleDhageyso Dhalinyarada Xarqaanleyda Ee Magaalada Baydhabo Oo Ka warbixiyay sida ay noloshooda ugu maareeyaan.
Next articleDHAGEYSO: Qoor Qoor oo ka horyimid in la qabo doorasho ay ka maqan yihiin P/land & J.land